mubvunzo Scenery kutorwa
1 gore 11 ago #355 by PADA52
rokutanga regai nditaure kuti uri kupa basa guru, kusanganisira mumwe "vasingabhadhari", kuti wakazadzwa Flyers akafanana Ndiri! Kubva website yako ndava kutorwa mamwe ndege, vanechitsama avo kwazvo yakatanga wakafanana Boeing 777-200ER Ultimate rongedza, chepakarepo Ndiri dzinenge kushandisa ndege iyi FSX wangu ndarama Magazini pamwe kumhanyisa rongedza.
Ndingada kumaka kuti Scenery vamwe Airport kuti ndava kutorwa zvikasashanda zvakanaka, ndava vaedza izvozvo tichinyanyotarisa Airports mbiri, chaizvo zvakanaka zvakagadzirirwa nenzira: Klagenfurt Airport (Austria) uye Richmond International (VA) USA , vose vane matambudziko pamwe ILS kumhara ezvinhu, wokutanga zvazvinoita nendege pamusoro chinhu chisingaoneki 30 tsoka pamusoro runway 28; wechipiri (Richmond) musi ILS 02 kuti ndege vakananga kuguma runway pachinzvimbo pakutanga runway 02.
Muzviitiko zvacho zvose ndava uninstalled avo Scenery itsva uye zvose zviri zviviri ILS anoshanda zvakakwana.
Unogona kuva vamwe mhinduro ichi kuti handizivi.